Nhau - Zvekunze fenicha mabhenji anomhanyisa kumhanya kwedu fekitori dhizaini
Nekudzoreredza kwemacro hupfumi uye kuwedzera kwekupinda kweiyo e-commerce, musika wekunze wefenicha weChina uri kuramba uchizivikanwa. Iyo ichangobva kuburitswa yekutarisa mushumo weChina ekisipoti data Research Center inoratidza kuti muhafu yekutanga yegore rino, huwandu hwekutengesa huwandu hweChina hwekunze hwakawanda kupfuura gore rapfuura
Chiitiko chakajeka chemari yemusika wekunze wekunze weChina wakwezva kutariswa kwemahofori makuru epasirese. Aya mahofori epasi rese akurumidzisa kumhanyisa kwemaitiro muChina, uye matafura ekunze ekupeta haasi izvo.
Vazhinji vanhu vanofarira tafura iri nyore yekupeta, inoshandisa zvakanyatsojeka .Pane vese mhuri dzemhuri vane tafura imwechete yekupeta senge fekitori yedu inogadzira.In Kuti tiwedzere musika, tiri kudzidza kushandisa zvirinani uye nekukurumidza tekinoroji kuvhura mamwe marudzi epurasitiki kupeta. tafura nechigaro.
Gore rino, isu tinotenga matatu akaridza kuumbwa michina uye akabhadhara 2 mukuru dhizaini kujoina yedu yekusimudzira timu. Saka ikozvino yakawedzera kugona kwekugadzira ne50% zvichienzaniswa neyekare
Vimba netafura yedu nyowani yepurasitiki yekupeta uye cheya ichakurumidza kupinda mumusika